Singa iray mamaritra ny fahasalamana ny toetr’andro miaraka amina singa maro samihafa, toy ny fomba amam-panao mahazatra, ny sakafo hohanina, ny fisiana fotodrafitrasa na tsia,… Misy fiantraikany mivantana ny maripana, izay raha mafana loatra dia mety hahafaty. Eo ihany koa ny tsy mivantana toy ny rotsak’orana sy hamandoana izay mamaritra ny firongatry ny moka miteraka tazo, ny fivalanana,… Tena misy ifandraisana mihitsy amin’ny toetr’andro ny coronavirus satria anisan’ny aretin’ny taovam-pisefoana. Rehefa miakatra ny maripana sy ny rotsak’ orana dia mahamora ny firongatany sy ny fifindrany, saingy mora maty izy satria tsy mahazaka taramasoandro. Tena tiany ny hatsiaka eo amin’ny 3 hatramin’ny 17°C, ary efa nohamafisin’ny fikarohan’ny manam-pahaizana fa ny 90% amin’ny olona tratry ny coronavirus dia nitranga tamin’ny toerana ambany ny maripana. Tiany ihany koa ny hamandoana. Tena mahazo vahana io amintsika hiditra amin’ny vaninandro ririnina io, ka tokony hitandrina sy hakarina hatrany hafanan’ny vatana. Efa fantatra ny toetrany fa tsy mahazaka mafana ka mila manao mafana. Samy manana ny hery fiarovany, ary rehefa mangatsiaka ny andro dia mihena amin’ny ankampobeny io ka tokony hakarina. Mila sakafo be otrikaina maro loko izay zakan’ny vatana sy amin’ny antonony. Mila tohizana hatrany ny fanasana tànana, ary mila mihiboka satria miha mihena ny rivotra maloto avoakan’ny fiara eny amin’ny arabe. Ilaina ny fanadiovana amin’ny lafiny rehetra.